အာရှမှာ Top Brand အဖြစ်9နှစ် ဆက်တိုက် ရပ်တည်နေတဲ့ Samsung
အာရှတခွင်မှာ အကောင်းဆုံး အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် ၉ နှစ်ဆက်တိုက် ဖော်ပြခံရတဲ့ Samsung
တောင်ကိုးရီးယား ကုမ္ပဏီကပဲ အပြုံးပန်းကို တစ်ကုံးပြီးတစ်ကုံး ဆင်မြန်းနေတယ်လို့ပဲ ဆိုရမလား လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် ကျော်ကျော်လေးတုန်းကမှ Top5Innovative ကုမ္ပဏီအဖြစ် Boston Consulting Group (BCG) နဲ့ Brand Finance တို့က ကြေညာပေးခဲ့တာပါ။
အဆိုပါ Position ကို အာရှတစ်ခွင်မှာ (၂) နှစ်ဆက်တိုက် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်သလို ကုမ္ပဏီရဲ့ စျေးကွက်အတွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ရှယ်ယာ ၊ အစုရှယ်ယာရှင်တို့ရဲ့ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် အစရှိတဲ့ အချက်လက်တွေပေါ် သုံးသပ်ပြီး Top5စာရင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့ B2C Brand လို့ ဆိုရမှာပါ။
9 years in-a-row
ယခုတခါမှာတော့ Nielsen နဲ့ Campaign Asia-Pacific တို့က အာရှတိုက်ရဲ့ ထိပ်တန်း အမှတ်တံဆိပ် အဖြစ် ကြေညာလိုက်သလို စစ်တမ်း ကောက်ယူမှု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ၁,၀၀၀ ထဲကမှ နံပါတ် (၁) နေရာမှာ ရပ်တည်နေခဲ့တာပါ။
လေ့လာချက်တွေအရ Samsung ကုမ္ပဏီဟာ အာရှတိုက်ရဲ့ Top Brand အဖြစ် ၉ နှစ်ဆက်တိုက် ရပ်တည်နေခဲ့လို့ 2011 မှ စတင်ပြီး ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
အခုလို သတ်မှတ်ပေးတဲ့ နေရာမှာ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အတွေး အမြင်၊ နှစ်သက်မှု အပေါ် စစ်တမ်းကောက်ယူ လေ့လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဥ် ၊ အစားအသောက် ၊ အဖျော် ယမကာ ၊ လျှပ်စစ် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ အစရှိတဲ့ ပင်မ အသုံးဆောင် (၁၅) မျိုးပေါ် မူတည်ပြီး သုံးသပ်ခဲ့တာပါ။
အဆိုပါ စစ်တမ်း ကောက်ယူမှုအတွက် အာရှတိုက်ရဲ့ စျေးကွက် (၁၄) ခုမှာ လေ့လာခဲ့သလို ပိုပြီးတော့ Specific ဖြစ်စေဖို့ အသက် အရွယ် ၊ ကျား ၊ မ နဲ့ အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေ အစရှိတဲ့ လူနေမှုဘဝ ပုံစံကိုပါ ထည့်သွင်းစဥ်းစားခဲ့တာပါ။
Campaign Asia-Pacific အဆိုရ အမှတ်တံဆိပ် ၁,၀၀၀ ရဲ့ စစ်တမ်းကို 2020 ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၁၉) ရက်တွင်း ကောက်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းဒေတာ စုဆောင်းထားတဲ့ Nielsen အချက်လက်နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးမှ ထုတ်ပြန်တာလို့ သိရပါတယ်။
စျေးကွက် (၁၄) ခု ဆိုတဲ့အတိုင်း ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေက သြစတြေးလျ ၊ တရုတ် ၊ ဟောင်ကောင် ၊ အိန္ဒိယ ၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ ဂျပန် ၊ မလေးရှား ၊ နယူးဇီလန် ၊ ဖိလစ်ပိုင် ၊ စင်္ကာပူ ၊ တောင်ကိုးရီးဘား ၊ ထိုင်ဝမ် ၊ ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ် အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဒေသတွေရဲ့ ပျမ်းမျှ လူဦးရေ ၄၀၀ ကျော်ရဲ့ တစ်ဦးခြင်း ဖြေဆိုမှုပေါ် အောက်ပါ မေးခွန်း (၃) မျိုးကို မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မေးခွန်း (၁) – သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအတွင်း မည်သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား သင်၏စိတ်အာရုံတွင် ဦးဆုံး တွေးမိ၊ စဉ်းစားမိသနည်း။ တစ်နည်း အရှင်းဆုံးပြောရလျှင် ၎င်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များတွင် သင် ယုံကြည် စိတ်ချရဆုံးသော၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမားဆုံးဟု ခံယူထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ရွေးချယ်ပေးပါ။
မေးခွန်း (၂) – သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအတွင်း အကောင်းဆုံး နံပါတ် (၁) ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အပြင် သင့်အနေဖြင့် မည်သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ဒုတိယ အကောင်းဆုံး၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဟု သတ်မှတ်ထားသနည်း။
မေးခွန်း (၃) – မည်သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ရေရှည်တည်တံ့ ထိန်းသိမ်း နိုင်မှုတွင် အကောင်းမွန်ဆုံး ဖြစ်သနည်း။
မေးခွန်းတွေကိုတော့ အာဘော် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိဘဲ တင်ဆက်ထားသလို Top Brand နဲ့ ပတ်သက်လို့ စာဖတ်သူအမြင်မှာရော ဘယ်လိုရှိလဲ?
သြဂုတ်လထဲမှာ ဆိုရင်လည်း Galaxy Note20 စီးရီးပါ တခြား Samsung Device (၅) မျိုးလောက် မိတ်ဆက်ဦးမှာဆိုတော့ စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်နေပြီလား?
Samsung Myanmar Press Release ကို တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်
6-cores Core i7 နဲ့ GeForce GTX 1650 Max-Q သုံးထားတဲ့ Prestige 14 ကို လေ့လာကြည့်ခြင်း